Iindaba - Umahluko phakathi komoya ojikelezayo wePipe kunye noMbhobho oQhelekileyo weWelded
Umahluko ophambili phakathi kwemibhobho emibini edibeneyo yombhobho wentsimbi ejikelezayo kunye nombhobho othe tye othe ngqo ngumahluko kwifom ye-welding.
Spiral welding pipe it is a low carbon carbon steel structural or a alloy low steel steel strip roll into tube blank with a helix angle (ebizwa ngokuba yi-angle angle), emva koko yadityaniswa yenziwa umbhobho, onokuthi usebenzise umtya omxinwa Ukuveliswa kwesinyithi kwimibhobho yentsimbi enkulu. Umbhobho wentsimbi eguqulwayo ubukhulu becala ngumbhobho we-arc ofakwe ngombhobho (SSAW), osetyenziswa rhoqo kulwakhiwo lwemibhobho yegesi eyahlukeneyo e-China. Ukucaciswa kwayo kuboniswa "ubukhulu bangaphandle * ubukhulu bodonga". Spiral welding imibhobho enye-macala welding kunye macala welding. Umbhobho odibeneyo uya kuqinisekisa ukuba uvavanyo lwe-hydraulic kunye namandla okuqina kunye nokusebenza okubandayo kokuguqa kwe-weld kuyahambelana nemimiselo.
Umbhobho othe tye wentsimbi ethe tye ngumbane ohamba rhoqo kunye nesiphumo sokusondela esiza kwenziwa ngumaleko we-solder ngaphambi kokuba i-welding yenziwe ngumatshini wokubumba, kunye nomphetho wombhobho ongenanto ufudunyezwe kwaye unyibilike, kwaye ufakelwe phantsi kwamandla athile ngokucindezela, ukupholisa ukubumba. Umbhobho ohamba ngesantya esiphezulu othe tyaba umbhobho osetyenzisiweyo osetyenziselwa ukunyibilika ngombhobho ongenanto unyibilikiswa ngoku kukuphinda-phinda (ERW), okubizwa ngokuba ngumthungo othe nkqo otywiliselwe umbhobho we-arc welding pipe (LSAW) ngokunyibilika ngombane wombane.
Amandla ombhobho wentsimbi ojikelezayo ngokubanzi uphakamile kunombhobho odibeneyo othe ngqo. Inkqubo ephambili yemveliso kukufaka i-arc welding. Umbhobho wentsimbi ojikelezayo unokuvelisa imibhobho edibeneyo ngee-diameters ezahlukeneyo zeepayipi kunye nobubanzi obufanayo, kwaye unokuvelisa iipayipi ezidibeneyo kunye nobubanzi obukhulu kunye nezikhala ezingenanto.
Inkqubo yemveliso yombhobho othe tyaba otyhidiweyo ilula ngokulula, ngakumbi kwinkqubo yemveliso, eyahlulahlulwe yaze-frequency e-welding straight seam welding pipe kunye ne-arc efakwe i-welded straight welded pipe. Umbhobho othe tye wentsimbi usebenze kakuhle kwimveliso, ixabiso eliphantsi kunye nophuhliso olukhawulezayo.
Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nombhobho othe ngqo wensimbi yombhobho wobude obufanayo, ubude be-weld bonyuswe nge-30 ukuya kwi-100, kwaye isantya semveliso sisezantsi. Ke ngoko, iityhubhu ezincinci ezibiyelwe ngombhobho ubukhulu becala zilungile nge-welded seam, ngelixa ubukhulu bezimbhobho ezinkulu zineesimbi ezijikelezayo.